कोरोना कहर : ज्यान जोगाउन गाउँ फर्कदा जसले बाटैमा ज्यान गुमाए
नेपाल लाइभ बुधबार, चैत १९, २०७६, ०८:३१
‘मेरो छाति एकदमै दुखिरहेको छ। मलाई लिन आउन सक्छौ भने आऊ..’
उनले अन्तिम पटक फोनमा परिवारसँग भनेका थिए।
दिल्लीमा ‘डेलिभरि म्यान’ का रुपमा काम गर्थे रणवीर सिंह। लकडाउन भएपछि बिहान बेलुकी खान नै समस्या भएपछि उनले केही साथीहरु भएर आफ्नो घर मध्यप्रदेश जाने निर्णय गरेका थिए। र, कुनै गाडी नपाएपछि पैदलै हिँडेका थिए।
तर बाटोमै आगरानजिकै उनको मृत्यु भयो। गाउँ पुग्न, परिवार भेट्न पाएनन्।
दिल्लीबाट निस्केपछि फरिदावाद पुगेर राति साढे नौ बजे बहिनी पिकींलाई फोन गरेका थिए । पिंकीले भनिन्, ‘मैले त्यसै दिन दाइलाई सम्झेर फोन गरेकी थिएँ, उनले घर आउँदैछु भनेका थिए,’ पिंकीले भनिन्,‘ लकडाउनका कारण काम पनि नभएको र कुनै साधन नपाएकाले हिँडेर आउँदै गरेको बताउनुभएको थियो।’ दिल्लीबाट पैदलै हिँडेर आउन लागेको सुनेर पिंकीलाई अचम्म लागेको थियो।
दाइसँग कुरा गरेपछि उनी आफ्नो औषधि खाएर सुतिन्। बिहान उठेपछि ५ बजेतिर उनले पुनः दाइलाई फोन गरिन्।
बिहानको फोनमा दाइको आवाज अर्कै भइसकेको थियो। । ‘यो पटकको फोनमा दाइले छाति एकदमै दुखेको बताउनुभयो, मैले एकछिन कतै बस्नू, त्यतिन्जेल म कसैलाई फोन गर्छु भनें,’ उनले भनिन्।
हिँडिरहँदा के भएको थियो रणवीरलाई?
रणवीर सिंह दिल्लीदेखि मथुराको बाटो हुँदै बिहान आगरा पुगेका थिए। उनी धेरै थाकेका थिए। बाटोमा केही केही किलोमिटर उनले एक ट्र्याक्टर पाएका थिए । तर लामो दूरी पैदलै तय गरिसकेका थिए। बाटोमा उनी एक्लै थिएनन् उनकै उमेरका धेरै र उनीभन्दा बढी उमेरका मानिस र बच्चाहरु पनि सँगै थिए।
उनीसगै उनका नातेदार अरबिन्द पनि काम गर्थे। उनी एक ट्रकमा गाउँ जादै थिए। बाटोमा अरविन्दसँग कुराकानी भइरहेको थियो । ‘मैले राति उनीसँग कुराकानी गरेको थिएँ , ज्वरो आइरहेको र धेरै थकाइका कारण टाउको पनि दुखेको बताएका थिए’ उनले सम्झे ‘ तर कोरोना भाइरसको डरका कारण कसैले उनको मद्दत गरेन त्यही अवस्थामा उनी अघि बढिरहे र आगरा पुग्दा उनको अवस्था खराब भयो ।’
रणवीर सिंहको मृत्यु नेशनल हाइवे २ मा विहान साढे ६ बजे भयो। आफ्नो अन्तिम सास लिनु अघि उनले अरविन्दसँग कुराकानी गरेका थिए। अरविन्दलाई फोन गर्दै उनले गुहार मागेका थिए ।
‘उनले मलाई फोन गरेर छाति धेरै दुखिरहेको छ , मलाई लिन आउन सक्छौ भने आऊ भनेका थिए, मैले उनलाई १०० नम्वरमा फोन गर्न र कसैको सहयोग लिन आग्रह गरे। यही बीचमा उनको आवाज बन्द भयो। यो कुराकानी भएको करिब ८ मिनेटपछि मैले ट्रकबाट ओर्लेर उनलाई फेरि फोन गरेँ । उनको फोन अरु कसैले उठाएर अवस्था निकै गम्भीर रहेको भनिरहेको थियो तर एकै छिनमा उनले संसारवाट विदा लिए।
रणवीर सिंहको मृत्युपछि उनको घरको अवस्था दयनीय भएको छ । रणवीरकी पत्नी ममता र उनका तीन बच्चा अब बेसहारा भएका छन् ।
àहामीले बुबालाई पनि चाँडै गुमायौं, यसपछि दाइले नै सबै घरको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको थियो,’ बहिनी पिंकीले भनिन्, ‘तीन साना बच्चा छन् अब घरमा कमाउने कोही पनि छैनन् ।’ अबका दिनका घरको अवस्था के हुन्छ भनेर आफूले सोच्नै नसकेको पिंकीले बताइन्।
दाइले घरका लागि डेढ लाख ऋण लिएको र अब त्यसलाई कसरी तिर्ने अनि दैनिक खान पाउने–नपाउने चिन्ता भएको पिंकीले बताइन्। यति भनिसक्दा भावुक भएकी पिंकीले अब त्यो घरको दियो निभेको टिप्पणी गरिन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लकडाउनका कारण गरिब परिवारलाई गम्भीर समस्या परेको भन्दै माफी मागेका थिए।
अब यो प्रश्न उठेको छ–मोदीलाई रणवीरको परिवारले माफी दिन सक्ला ?
यो कुरा त आउने समयले नै बताउँला।